Malcolm Waller - Batting with Bimal
Tag Archives: Malcolm Waller
Sri Lanka vs Zimbabwe Only Test Day 3: Raza leads Zimbabwe’s fightback after Herath’s four-for
Raza led Zimbabwe’s revival with his unbeaten knock of 97
Sri Lanka spinner Rangana Herath ripped through Zimbabwe’s batting line-up with a four-wicket haul and left them struggling at 59/5, but Sikandar Raza grabbed the headlines on the third day in Colombo as he scored an unbeaten 97 to help his side’s lead swell to 262 runs.
Sri Lanka vs Zimbabwe 2nd ODI: Sandakan’s four-for helps Sri Lanka level series
Posted on July 2, 2017 by bimalmirwani
Sandakan finished with figures of 4-52 off his 10 overs
After being stunned in the first ODI, Sri Lanka bounced back with a clinical performance as they crushed Zimbabwe by seven wickets in Galle behind left-arm spinner Lakshan Sandakan’s four-wicket haul.
Netherlands vs Zimbabwe 3rd Match: Netherlands pummel Zimbabwe to clinch consolation win
Posted on June 25, 2017 by bimalmirwani
Van der Merwe finished with figures of 3-7 off 2.3 overs
The Netherlands avoided being whitewashed in their three-match series against Zimbabwe as they won the third match at The Hague by 149 runs.
Zimbabwe vs Afghanistan 3rd ODI: Zimbabwe make history in nail-biting win
Chatara finished with figures of 3-30 off his 10 overs
Zimbabwe defended a score of 129 in the third ODI against Afghanistan in Harare to keep themselves alive in the five-match series. Continue reading →
Bangladesh vs Zimbabwe 4th T20: Masakadza helps Zimbabwe end series as 2-2 draw
Posted on January 22, 2016 by bimalmirwani
Masakadza walloped eight boundaries and five sixes during his unbeaten knock of 93
Hamilton Masakadza hammered 93 not out as Zimbabwe beat Bangladesh by 18 runs, which subsequently saw the series end as a 2-2 draw.
Bangladesh vs Zimbabwe 3rd T20: Waller keeps Zimbabwe alive
Waller was named Man of the Match for his fantastic innings of 49
Zimbabwe batsman Malcolm Waller smashed a magnificent 49 to not only lead his side to a 31-run win over Bangladesh, but also reduce the series deficit to 2-1.
Bangladesh vs Zimbabwe 2nd T20: Bangladesh go 2-0 up
Rahman was named Man of the Match for his all-round performance
Bangladesh opener Soumya Sarkar and batsman Sabbir Rahman both made 43 runs to help their side cruise to a 42-run win over Zimbabwe in the second Twenty20 International in Khulna.
Sibanda, Vitori recalled for Bangladesh T20 series
Sibanda has not played for Zimbabwe since July 2015
Zimbabwe have recalled batsman Vusi Sibanda and left-arm pace bowler Brian Vitori into the their squad for the upcoming Twenty20 series against Bangladesh.
Afghanistan vs Zimbabwe 1st T20: Afghanistan sneak past Zimbabwe to go 1-0 up
Posted on January 9, 2016 by bimalmirwani
Naib was named Man of the Match for his all-round performance
Following a thrilling conclusion to the ODI series, Afghanistan were involved in another nail-biter as they skirted past Zimbabwe by five runs in the first Twenty20 International in Sharjah.